Koofur galbeed oo u jawaabtay Puntland – Bandhiga
Koofur galbeed oo u jawaabtay Puntland
Qoralkaan waxaa qoray muqtaar maxamed guleed wasiirka xananada xolaha konfur galbed
“Wasiirka Cadaaladda & Arimaha diinta Cawil_Sheekh_Xaamud hala iga gaarsiiyo sawiradan quruxda badan iyo goobtaba inay yihiin Baydhabo_Janaay xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya.
Dhanka kale xilligan madaxweynihiisu H.E Said Abdullahi Deni ma uusan aadin #Dubai, Emirates si uu garab siyaasadeed iyo dhaqaaleba uu halkaasi ugu soo qaato balse waxa uu #Baydhabo_Janaay uyimid in lagu hago siyaasadiisa maadaama uu xilligaasi ahaa mid aan fahansaneynba halka ay siyaasada dalka usocoto, maalmo uu ka faaideystay khibradda siyaasadeed ee Madaxweyne Cabdicaziiz Laftagareen ayaa si qurux badan oo ay Soomaalinimo kujirto loogu sagootiyey #Baydhabo_Janaay maantase waan ka xumahay in madaxweynihii sida qiimaha badnaa loo sagootiyey wasiirkiisii Cadaaladda & Arimaha diinta uu ku hadlo hadal aysan ku hadli karin caruurta aan qaangaarin weli waayo waxa uu dafiray halkii uu madaxweynihiisa usoo doontay khibradda kuna sugnaa maalmo.
Puntland waxa ay isku sheegtaa inay tahay hooyada Federaalka Soomaaliya laakiin umadda Soomaaliyeed waxa ay marqaati kayihiin maanta in Puntland State House ay tahay caqabadda koowaad ee dowladnimada Soomaaliya oo marnabana raali kama ahan in dalku yeesho dowlad xoogan.
-Puntland waa dowlad goboleedka keliya oo uu ka taliyo Keligii talis oo mudo Sanad ah gudihiisa Xasaanadii kaga qaaday Guddoomiyihii Baarlamaanka oo dharaar cad lagu weeraray rasaas nool nool iyo sidoo kale in 8 xildhibaan oo shacabkoodu soo doortay xilka looga qaaday si qasab ah laguna bedelay kuwo kale.
-Puntland wax cadaalad ah haba yaraatee kama jiraan lagamana sugayo hadiiba midka sidan uhadlay uu yahay midkii Cadaalada ay ka sugayeen shacabka qiimaha badan ee reer Puntland waxaana rajeynayaa inay iska dulqaadi doonaan kooxda AARAN-JAAN sida ka bilaabatay #Dhahar.
Dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo aan kamid ahay waxa ay xushmad, qadarin & walaalnimo uheysaa dhamaan dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalka Soomaaliya, waxa ayna diyaar utahay marwaliba inay hormuud unoqoto wadajirka iyo horumarka dalka ee diyaar uma ahan inay caqabad ku ahaato geedi socodka doorashooyinka iyo horumarka dalka.